Including: Crisis in Zimbabwe
< Mental Health Crisis
Sterling Crisis >
Within that wide-ranging debate, we have had another on the Crisis in Zimbabwe, which we all take seriously.
The Minister of State, Foreign and Commonwealth Office (Mr. John Battle) - March 22, 2000
The current Crisis in Zimbabwe, as in many African countries, has three basic elements: the crisis with regard to the availability of foreign exchange; the crisis in government financing; and the debt crisis.
The Earl of Caithness - March 22, 2000
It is very much in the interests of South Africa and of the other neighbouring countries that they assist us in resolving the political Crisis in Zimbabwe, to pave the way for economic progress.
Mr. Cook - May 3, 2000
Mr. Brady: To ask the Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs, pursuant to his oral statement of 3 May 2000, Official Report, columns 149–50, if he will list the dates of his meetings with the previous Secretary-General of the Commonwealth to discuss the Crisis in Zimbabwe.
Mr. Brady - May 8, 2000
It is fair to say that one of our strengths in the current Crisis in Zimbabwe is the universal support that we have had from many of the Commonwealth African leaders, especially President Obasanjo of Nigeria, who has been robust in his criticism.
Mr. Cook - May 16, 2000
As I said, the Crisis in Zimbabwe demonstrates the need for the Commonwealth to step up when a member state starts to run off the road.
Mrs. Gillan - June 7, 2000
The Commonwealth ministerial action group, having considered the Crisis in Zimbabwe, will no doubt have to consider what happens after the elections.
Mr. Hain - June 20, 2000
Mr. Robin Cook: The economic Crisis in Zimbabwe continues to deepen.
Mr. Robin Cook - Nov. 7, 2000
There is no doubt that South Africa's tactic of silent diplomacy in respect of the Zimbabwe Crisis has been to the detriment of both countries.
Mr. Baldry: To ask the Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs what discussions he has had with the South African Government concerning the economic Crisis in Zimbabwe.
Mr. Baldry - March 27, 2001
My right hon. Friend the Member for Swansea, East (Mr. Anderson) is right: the Crisis in Zimbabwe is especially acute for the people of that country, but it is having a dramatic and serious economic effect on neighbouring countries such as South Africa and Mozambique.
Oral Answers To Questions — Commonwealth Monitoring Action Group
Mr. Cook - May 1, 2001
I believe that a resolution of the Crisis in Zimbabwe is very important for the future of the Commonwealth.
Lord Blaker - June 28, 2001
My Lords, I agree absolutely with the noble Lord, Lord Blaker, on the importance of the Crisis in Zimbabwe to the future of the Commonwealth and indeed Africa as a whole.
Lord Avebury - June 28, 2001
Does he agree that at a time of deepening Crisis in Zimbabwe, and as Britain's diplomatic efforts in Africa have completely collapsed this week at the meeting of the Organisation of African Unity, it is extremely regrettable that the British Government's response has been to downgrade the ministerial responsibility for Africa from a Minister of State to two Under-Secretaries?
Graham Brady - July 10, 2001
Hardly a day goes by without more revelations of human rights violations and of the increasingly dire social, political and economic Crisis in Zimbabwe.
Lord St John of Bletso - Dec. 12, 2001
Is it not time that we had a full-day's debate on the Crisis in Zimbabwe?
Henry Bellingham - Jan. 10, 2002
May I draw the Leader of the House's attention to another aspect of the Crisis in Zimbabwe: the urgent need for reconstruction in the country if Robert Mugabe were to lose the election in four weeks' time?
Norman Lamb - Feb. 14, 2002
Whatever the outcome of the present Crisis in Zimbabwe, I urge the Government, with respect, to continue to hold fast to the kind of vision that NePAD represents - a New Partnership for Africa's Development, which already involves 16 African nations.
The Lord Bishop of Lichfield - March 6, 2002
The current Crisis in Zimbabwe was extensively discussed.
Tony Blair - March 6, 2002
Barbara Follett - March 12, 2002
Furthermore, we are funding the World Food Programme because there is a serious humanitarian Crisis in Zimbabwe.
Baroness Amos - March 19, 2002
However, there continues to be a major Crisis in Zimbabwe.
- April 9, 2002
As my hon. Friend says, one of the heartening aspects of the Zimbabwe Crisis has been the leadership on offer from Africa.
Denis MacShane - April 16, 2002
Does the Minister agree that it is important that the growing Crisis in Zimbabwe is not driven on to the back burner because of the crisis in the middle east and other problems in the world?
Nicholas Winterton - April 16, 2002
I do not know the agenda for that meeting but I am aware that there are concerns about the growing economic Crisis in Zimbabwe.
We know that the Crisis in Zimbabwe is getting worse.
Michael Ancram - June 25, 2002
It must be bound together by an understanding that failure to deal with the Crisis in Zimbabwe threatens the whole region and will make international economic support for the region less practicable.
The United Kingdom's contribution to attempts to deal with the humanitarian Crisis in Zimbabwe stands at £32 million.
Baroness Amos - Oct. 8, 2002
The UN is trying to cope, through the World Food Programme, with the significant humanitarian Crisis in Zimbabwe.
Baroness Amos - Oct. 10, 2002
Are the Government now considering that type of measure for the current Crisis in Zimbabwe?
Michael Moore - Dec. 17, 2002
The increasingly dire social, economic, political and environmental Crisis in Zimbabwe worsens by the day.
Lord St John of Bletso - March 5, 2003
Brian Kagoro, the national co-ordinator of Crisis in Zimbabwe, looking for support from some of the newer African governments, said: "What you need in Africa are voices of dissent.
Lord Astor of Hever - March 5, 2003
As the noble Lord, Lord Blaker, made clear, the economic Crisis in Zimbabwe is having an impact on neighbouring economies.
Baroness Amos - March 5, 2003
The problem is that, between independence in 1980 and the development of the Zimbabwe Crisis about 18 or 19 years later, there was no public diplomacy by the Government of this country—on Matabeleland or on the growing use of torture and terrorist tactics by ZANU—PF to alert the world to the crisis and tragedy of Zimbabwe.
Mr. MacShane - April 1, 2003
However, there continues to be a major Crisis in Zimbabwe, where over seven million people are likely to continue to need assistance during the next 12 months.
Food Shortages (Southern Africa)
Africa has failed to grapple with the Crisis in Zimbabwe, which many people in western countries see as a test of the rigour and effectiveness of NEPAD's commitment to good governance and human rights.
Hugh Bayley - April 29, 2003
If the concept of partnership that is enshrined in NEPAD is to have any meaning, the UK must continue to play a leading role in working with African nations to resolve the Crisis in Zimbabwe.
David Chidgey - April 29, 2003
James Morris, director of the World Food Programme—who briefed the United Nations Security Council on 7 April—described the humanitarian Crisis in Zimbabwe as "almost beyond comprehension".
Mr. Straw - May 6, 2003
James Morris, director of the World Food Programme - who briefed the United Nations Security Council on7 April - described the humanitarian Crisis in Zimbabwe as "almost beyond comprehension".
Jack Straw - May 6, 2003
We are determined that the Zimbabwe Crisis should not undermine NEPAD, although it has certainly not made NEPAD's implementation any easier.
The humanitarian Crisis in Zimbabwe cannot be resolved without political and economic change, but we must do all that we can to support its people until that change comes about.
International Development - Zimbabwe
Clare Short - May 7, 2003
Of course, many other conditions are associated with the circumstances and humanitarian Crisis in Zimbabwe, which will, sadly, produce deaths.
Sally Keeble - May 19, 2003
I do not believe that the link between the success of NePAD and resolving the Zimbabwe Crisis has been fully digested and accepted by all African leaders.
Lord St John of Bletso - May 21, 2003
I cannot agree with the noble Baroness, Lady Rawlings, that nothing has been done to deal with the humanitarian Crisis in Zimbabwe.
Baroness Amos - May 21, 2003
Consistent with this African-led initiative, we discussed the steps they are taking to resolve the current appalling Crisis in Zimbabwe.
Lord Williams of Mostyn - June 4, 2003
Consistent with the African-led initiative, we discussed the steps that are being taken to resolve the appalling Crisis in Zimbabwe.
Tony Blair - June 4, 2003
At the G8 summit in Evian my right hon. Friend the Prime Minister and other G8 leaders took the opportunity to discuss with President Mbeki and other African leaders the steps they are taking to resolve the current Crisis in Zimbabwe.
And when will the Foreign Secretary go to the United Nations Security Council to seek a resolution to internationalise the Crisis in Zimbabwe and put observers on the ground?
Michael Ancram - June 10, 2003
UK NGOs and charities are playing a vital role in responding to the Crisis in Zimbabwe, and DFID's country team supports and assists those present in Zimbabwe.
Mr. Mullin: The high commissioner and his staff are in daily contact with the FCO about the political, economic and humanitarian Crisis in Zimbabwe.
Mr. Mullin - June 24, 2003
Miss McIntosh: To ask the Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs what steps he has taken within the United Nations to ensure that action is taken to end the Crisis in Zimbabwe.
Miss McIntosh - June 24, 2003
We will continue to encourage the UN to focus on the Crisis in Zimbabwe.
As the communiqué from the Abuja agreement in September 2001 rightly observed: "Land is at the core of the Crisis in Zimbabwe and cannot be separated from other issues of concern to the Commonwealth, such as the rule of law, respect for human rights" and democracy.
Tony Baldry - June 26, 2003
My Lords, the Zimbabwe Crisis is damaging regional economies and has adversely affected their interest rates, inflation, foreign direct investment and tourism.
Baroness Symons of Vernham Dean - July 7, 2003
The Zimbabwe Crisis is obviously producing a flow of refugees across its borders.
] When the Under-Secretary, Baroness Amos, wrote to me in June last year, she was as unhelpful as the Foreign Secretary: "I fear that until there is an improvement in the economic Crisis in Zimbabwe, and the value of the Zimbabwean dollar on the foreign exchange market increases, there is unlikely to be any improvement in the level of pensions paid to pensioners.
Hugo Swire - July 15, 2003
There is absolutely no doubt that the Crisis in Zimbabwe is spilling into surrounding countries, leading to a dramatic drop in inward investment and considerable numbers of refugees.
Richard Spring - July 15, 2003
NePAD's credibility has certainly been harmed by the inability of African leaders to expedite the resolution of the Zimbabwe Crisis.
Lord St John of Bletso - Oct. 15, 2003
The Crisis in Zimbabwe has now dragged on for a very long time.
Kate Hoey - Oct. 22, 2003
It is now more than three years since the Victoria Falls conference in April 2000, when he publicly undertook to resolve the Zimbabwe Crisis, and all his attempts have utterly failed.
If human rights abuses continue to worsen, the political and economic Crisis in Zimbabwe will be difficult to heal".
Chris Mullin - Oct. 22, 2003
The problems facing The Daily News are a clear symptom of the humanitarian Crisis in Zimbabwe, and it is especially important that the world focuses on the daily erosion of human rights.
It discredits this Government that there has still been no Government debate on the Crisis in Zimbabwe.
Andrew Robathan - Nov. 18, 2003
However, because what he did in the land reform process - we have not agreed with it, and the way in which it was undertaken has led to much of the humanitarian Crisis in Zimbabwe - was seen as dealing with historical injustice, it has been welcomed in some parts of Africa.
Baroness Amos - Dec. 2, 2003
What are Her Majesty's Government doing to ensure that the commitments and promises given earlier this year by President Thabo Mbeki to our Prime Minister, as well as to President Bush, that there would be a resolution of the Crisis in Zimbabwe by mid-2004 are met?
- Zimbabwe: Aid Distribution
Lord St John of Bletso - Dec. 15, 2003
I am baffled as to why, with the Crisis in Zimbabwe having loomed large on the radar screen of both the foreign policy and international development agendas, Her Majesty's Government have not found time for a full debate in government time either here or in another place.
Lord Astor of Hever - Jan. 28, 2004
There is real hope that the Zimbabwe Crisis will soon be relieved and that that will give new momentum to NePAD and real hope that the vision of an African renaissance will materialise.
Lord St John of Bletso - Jan. 28, 2004
Those particular attacks do not appear to be politically motivated; rather, they are a tragic consequence of the Crisis in Zimbabwe.
Baroness Crawley - Jan. 28, 2004
I can assure my hon. Friend that the international community, which is providing support to meet the Crisis in Zimbabwe - the UK is the second largest contributor of humanitarian aid - is very clear and very firm in not tolerating any political interference in the distribution of food aid.
Hilary Benn - Jan. 28, 2004
The Government must realise that, by not dealing with the mounting Crisis in Zimbabwe, they are being irresponsible, and thus are partly responsible for the tragic situation continuing.
Hugo Swire - March 9, 2004
We have never suggested that solving the Crisis in Zimbabwe would be easy or could be accomplished overnight, but there will certainly not be progress if we do not move the process on more forcefully.
Richard Spring - March 9, 2004
Do the Government see the Commission as playing a more effective role in resolving the Zimbabwe Crisis?
Lord Howell of Guildford - March 29, 2004
The continuing humanitarian Crisis in Zimbabwe is a topic of constant discussion among the donor community, including the United Nations.
Baroness Amos - May 25, 2004
It is worth reminding ourselves of the nature of the Crisis in Zimbabwe, which can best be described as a series of deficits.
Michael Ancram - July 1, 2004
I am fobbed off with the answer that because the Zimbabwe Crisis is an internal or domestic problem, the UN cannot get involved - tell that to some 127,000 Zimbabwean refugees who are trying to get into Botswana each month.
The solution to the Zimbabwe Crisis now has to lie in a partnership between the people of Zimbabwe and the international community.
Kate Hoey - July 1, 2004
They feel that the only way of making the international community take the Crisis in Zimbabwe seriously is to resort to violence.
Inward investment to the region is never likely to pick up while sores such as the Zimbabwe Crisis are allowed to fester.
The South Africans are under no illusions about the extent of the Crisis in Zimbabwe.
Chris Mullin - July 13, 2004
Finally, African leaders now recognise that the Crisis in Zimbabwe is about tyranny, breakdown of the rule of law, harsh repression of criticism and gross misgovernance.
Lord Avebury - Nov. 24, 2004
Could not a strong statement by the G7, stressing the importance of the other African countries to resolve the Zimbabwe Crisis in accordance with their treaty obligations, be of value - especially if it were endorsed by Nelson Mandela, who will attend the conference?
Lord Blaker - Feb. 3, 2005
For far too long many people have refused to point a finger at the power lust and corruption of the ZANU-PF regime and identify it as the fundamental cause of the Crisis in Zimbabwe for fear that it might jeopardise their operations in the country.
Baroness Cox - March 9, 2005
The international community's responsibility for preventing the Crisis in Zimbabwe dragging down the rest of southern Africa, as has been described by the noble Lord, Lord Blaker, and others, is a huge one.
Lord Avebury - March 9, 2005
It is unnecessary to go over that ground again, as the contributions this afternoon served to underline the depth of understanding in this House of the Crisis in Zimbabwe.
Baroness Crawley - March 9, 2005
I hope and pray that sanity will prevail in resolving the Zimbabwe Crisis.
Lord St John of Bletso - June 20, 2005
The humanitarian Crisis in Zimbabwe is very real, but it is increasingly clear that condemnation of Mugabe and his regime, whether by our Government or other hon. Members, is like water off a duck's back.
Hugh Bayley - June 27, 2005
, the Foreign Secretary made a public call for Africans to deal with the Crisis in Zimbabwe.
Ian Pearson - June 27, 2005
Unless resolute action is taken, I fear that the humanitarian Crisis in Zimbabwe will move to a new and even more sinister phase.
Kate Hoey - June 27, 2005
I share the hon. Gentleman's assessment of the current Crisis in Zimbabwe.
Hilary Benn - March 1, 2006
The Crisis in Zimbabwe is a threat to the stability of southern Africa.
Lord Astor of Hever - Oct. 19, 2006
The Crisis in Zimbabwe is caused by bad governance and bad policies.
Lord Triesman - Oct. 19, 2006
The victims of Mugabe's self-inflicted Crisis in Zimbabwe are Zimbabweans - the vulnerable, the homeless, the orphans, the hungry and those suffering from HIV/AIDS.
Until now, the Government have preferred to play a behind the scenes role in dealing with the Crisis in Zimbabwe, and Ministers have been anxious - perhaps understandably - to avoid playing to Mugabe's propaganda scripts, which portray the Zimbabwe crisis as a bilateral post-colonial dispute.
Kate Hoey - Nov. 22, 2006
Regarding the weakening of the European Union position, I maintain that the EU stands firmly in agreement on the Crisis in Zimbabwe.
Baroness Royall of Blaisdon - Jan. 8, 2007
Our deep concern about the political Crisis in Zimbabwe, and the economic crisis that it has generated, remains undiminished.
Joan Ryan - Feb. 7, 2007
Ministers and officials are in constant contact with our African counterparts, emphasising the risks to regional stability and the importance of Zimbabwe's African neighbours taking a more direct role in addressing the Crisis in Zimbabwe.
Ian McCartney - March 26, 2007
Increasingly, African Heads of State are now, thankfully, speaking out and deriding the Zimbabwe Crisis as being embarrassing for Africa.
Lord St John of Bletso - April 16, 2007
My Lords, the Prime Minister and president agreed that the states in the region had a key role in finding a solution to the Crisis in Zimbabwe.
Lord Triesman - June 5, 2007
Before he leaves his current position - I congratulate him on the work that he has done since he was appointed Leader of the House - will he announce today that there will be a debate on the Floor of the House, in Government time, on the Crisis in Zimbabwe, a country that is important to the future of central southern Africa?
Nicholas Winterton - June 21, 2007
Before he leaves his current position - I congratulate him on the work that he has done since he was appointed Leader of the House - will he announce today that there will be a debate on the Floor of the House, in Government time, on the Crisis in Zimbabwe, which is an important country to the future of central southern Africa?
In those discussions, we have welcomed the engagement of those states in attempting to resolve the Crisis in Zimbabwe.
Lord Triesman - June 27, 2007
My Lords, the Crisis in Zimbabwe is deepening.
Baroness Royall of Blaisdon - July 12, 2007
Other hon. Members have mentioned the importance of other African nations accepting that the Crisis in Zimbabwe is the responsibility of all Africa, not just Zimbabweans.
John Barrett - July 19, 2007
I add my thanks to him for his continued engagement in the Crisis in Zimbabwe and acknowledge that I have learnt a lot from him this evening.
Zimbabwe: Public Servants
Lord Malloch-Brown - Oct. 22, 2007
It follows similar statements by President Museveni of Uganda and President Yar'Adua of Nigeria, perhaps indicating a change of attitude to the Zimbabwe Crisis by African leaders.
Lord Avebury - Dec. 3, 2007
Others will speak with greater knowledge and authority on the Crisis in Zimbabwe.
Lord Alton of Liverpool - Dec. 13, 2007
By prolonging the Crisis in Zimbabwe, these countries are adding to the massive sums that will be required for reconstruction when ZANU-PF eventually goes and undermining the development of the region as a whole.
Lord Blaker - Feb. 6, 2008
As the noble Lord, Lord Morris, has already said, there is already a profound humanitarian Crisis in Zimbabwe.
Lord Alderdice - Feb. 6, 2008
We all respect his continued commitment to raising the Crisis in Zimbabwe at every possible opportunity.
Lord Malloch-Brown - Feb. 6, 2008
First, it has been important to emphasise that there is a humanitarian Crisis in Zimbabwe, which requires humanitarian action by the Department for International Development.
David Miliband - Feb. 19, 2008
In truth, in spite of what President Mugabe would want the world to believe, the Crisis in Zimbabwe has never been about personalities.
David Miliband - April 2, 2008
My Lords, the Crisis in Zimbabwe continues.
Lord Malloch-Brown - April 24, 2008
Ultimately, our intention is to aim for an embargo by the Security Council, particularly if the constitutional Crisis in Zimbabwe continues, but our current priority is to prevent arms from reaching Zimbabwe, and we are open on how states achieve that.
Meg Munn - April 29, 2008
My Lords, the Zimbabwe Crisis must be resolved quickly and in accordance with the will of the Zimbabwean people.
Lord Malloch-Brown - May 7, 2008
Given that Tonderai Ndira, a prominent Movement for Democratic Change activist in Zimbabwe, whom I had the privilege to meet in 2004, was found dead on Tuesday in a Harare hospital mortuary only days after being violently abducted by a group of armed thugs, may I reiterate the pertinent request ofthe hon. Member for Sutton and Cheam (Mr. Burstow) that the House should debate the escalating Crisis in Zimbabwe as a matter of urgency?
John Bercow - May 22, 2008
My Lords, the Prime Minister, the Foreign Secretary and I are in regular contact with SADC leaders and Foreign Ministers to discuss the Crisis in Zimbabwe.
Lord Malloch-Brown - June 3, 2008
Meanwhile, Mbeki used his vote at the UN Security Council to block discussion of the Crisis in Zimbabwe.
Baroness Park of Monmouth - June 3, 2008
What action will the Prime Minister take to encourage the African nations to help resolve the current Crisis in Zimbabwe?
Khalid Mahmood - June 25, 2008
The fourth point is the vital need to ensure that despite the focus on the politics we do not lose sight of the humanitarian Crisis in Zimbabwe.
David Miliband - July 3, 2008
The humanitarian Crisis in Zimbabwe is probably the worst anywhere in the world outside a war zone.
William Hague - July 3, 2008
That is currently under discussion and will be a further powerful expression of the international community's concern about the Crisis in Zimbabwe, already expressed in the UN Security Council presidential statement of23 June.
Lord Malloch-Brown - July 8, 2008
First, I am sure that hon. Members in all parts of the House are concerned about the latest tragic news from Zimbabwe, so will the Leader of the House make sure that before the Christmas recess the House is informed about steps being taken to resolve the political Crisis in Zimbabwe and to ensure that those innocent people are given the help that they desperately need?
Theresa May - Dec. 4, 2008
What can he do to ensure that they understand that resolving the Crisis in Zimbabwe is essential not only for the people of Zimbabwe, but for the development of the entire region of southern Africa?
Malcolm Bruce - Dec. 17, 2008
The response from both the African Union and the Southern African Development Community to the Zimbabwe Crisis has been disappointing and timid.
Lord Chidgey - July 8, 2010
I am reassured that a new consensus is developing in SADC that the Crisis in Zimbabwe is dragging down the region and compromising social stability and economic progress.
I am reassured that a new consensus is developing in the SADC that the Crisis in Zimbabwe is dragging down the region and compromising social stability and economic progress.